Fihaonana aty Afrika 2018: atao laharaham-pahamehana ny vehivavy | NewsMada
Fihaonana aty Afrika 2018: atao laharaham-pahamehana ny vehivavy
Natao tany Charm el-Cheick, Egypta, ny “Forum Africa 2018”, ny volana desambra teo. Natokana io fihaonana io ho an’ny tanora mpandraharaha. Lohahevitra noraisina “Ny vehivavy ho fahombiazan’i Afrika”.
Filoham-pirenena maro, filohan’ny banky samihafa, miaraka amina mpandraharaha isan-karazany ny nandray anjara tamin’ny “Forum Africa 2018”. Amin’ireo tanora ireo, maherin’ny 200 ireo vao manomboka amin’ny sehatra nisafidiny ka hampifandraisina amin’ireo mpampiasa vola, toy ny banky, ny Comesa, ny mpandraharaha matihanina, hanampy azy ireo amin’ny sehatra trandrahiny.
Fandaharanasa mazava sy mitondra fampandrosoana ny naroson’izy ireo.
Nanome toky ireo tanora ny filohan’i Egypta, i Abdelfattah al-Sissi, ny amin’ny fepetra horaisina hahatonga azy ireo hampandroso ny toekarena. Tsy atao ankilabao ny tanora vehivavy manana ny tetikasany.
« Ezahina entanina ny tanora hanana kolontsaina hitrandraka ny fandraharahana ao anatin’ny fanavaozana ny fomba fiasa », hoy ny minisitry ny Fampiasam-bola sy fiaraha-miasa iraisam-pirenena any Egypta, i Sahar Nasr.
Tsy vitsy ny laminasa napetraka ho fantatry ny firenen-kafa aty Afrika, toy ny eto Madagasikara. Nambara momba izany ny fanampiana feno, ahitana famatsiam-bola, tolo-kevitra sy tohana teknika, raharaha momba ny varotra sy ny fanafainganana ny tetikasa.